२३ विशेष प्रहरी नै एक महिनादेखि बन्दी ! – Etajakhabar
२३ विशेष प्रहरी नै एक महिनादेखि बन्दी !
इलाम । नेपाल प्रहरीका २३ विशेष प्रहरीहरुलाई प्रदेश नम्बर एकका प्रहरी प्रमुख एआइजी पशुपती उपाध्यायले एक महिना देखि प्रहरी गणमा भेला पारेर “निगरानी” मा राखेका छन्। उनीहरुलाई आदेश विना बाहिर निस्कन दिइएको छैन भने कसुरको बारेमा समेत केही भनिएको छैन।
असोज १० गतेदेखि गणमा लगेर राखिएका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, उदयपुरलगायतका घुमुवा प्रहरीलाई अपराधी जस्तै व्यवहार गरेर राखिएको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो “अपराध गरेको भए कारवाही हुनुपर्यो।’ निर्दोषलाई मानसिक यातना दिनेकाम भएको एक घुमुवा प्रहरीको आरोप छ।
पहाडी क्षेत्रमा काम गरिरहेको घुमुवालाई मात्र उपाध्यायले गणमा राखेको हुन्। एक घुमुवाले आरोप लगाए‘ हाकिमलाई रकम उठाएर बुझाउनेलाई यहाँ ल्याइएको छैन।’ विराटनगर प्रहरी गणमा अहिले १३ जना जवान, ६ जना हवल्दार र ४ जना असइलाई अनुसन्धानको नाममा बन्दी बनाएको स्रोतले जनाएको छ। उनीहरुलाई तिहारमा एक दिन विदा दिएपनि भोलि पल्टनै विराटनगर बोलाइएको थियो।
स्रोतले भन्यो ‘वाहिर जान आदेश छैन, डिउटीमा अरुको निगरानीमा कहिलेकाही गस्तिमा पठाउने गरिएको छ।’ घुमुवा पहरीलाई अपराध अनुसनधन, अपराधीको खोज तलास र सुराकीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। निर्वाचनको मुखमा घुमुवा प्रहरीको आवश्यकता अझ बढ्ने भएपनि पहाडी जिल्लामा भने उनीहरुको उपस्थिती सुन्य भएको छ।
गणमा बन्दी बनाउनु अघि उनीहरुलाई १३ दिने पुर्न ताजगी तालिम दिइएको थियो।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक ०७, २०७४ समय: ७:२९:२३